Kitra – Telma coupe de Madagascar: famaranana kely ny an’ny Disciples FC sy ny Mama FC | NewsMada
Kitra – Telma coupe de Madagascar: famaranana kely ny an’ny Disciples FC sy ny Mama FC
Ho fantatra, anio, izay ekipa 8 mbola hanohy ny dia ho amin’ny fiadiana ny amboaran’i Madagasikara «Telma coupe de Madagascar», taranja baolina kitra. Andrasan’ny rehetra ny fihaonan’ny Disciples FC sy ny Mama FC.
Hotanterahina amin’ity alakamisy 22 jolay ity ireo lalao dingana ampahavalon-dalana, hiadiana ny amboaran’i Madagasikara, taranja baolina kitra “Telma coupe de Madagascar”. Hampiantrano izany ireo kianja efatra dia Analamanga, Matsiatra Ambony, Boeny ary i Vatovavy Fitovinany.
Anisan’ny fihaonana goavana ary hiendrika famaranana kely ny donan’ny Disciples FC Analamanga sy ny Mama FC Betsiboka. Hilalao eo amin’ny kianja mahazatra azy eny amin’ny Elgeco Stadium ny Disciples FC, izay heverina fa manana tombony. Etsy an-kilany, klioba tsy vaovao amin’ny fifaninanana toa izao ihany koa ny Mama FC satria misy ireo mpilalao tanora sy matanjaka ary manana ny fahaiza-manao.
Tsiahivina fa klioba dimy ao amin’ny “Pro league” sisa mbola manohy ny fifaninana dia ny Uscafoot, ny Elgeco Plus, ny Cosfa, ny Adema ary ny CS-DFC. Mbola fihaonana hanamarika ity anio ity ihany koa ny fanafihan’ny Cosfa (Bebaoty) ny Boaikelin’ny JTM Boeny sy ny fandraisan’ny Fortior Club de la Côte Ouest (FCO) ny Adema, tompondakan’i Madagasikara.
-Elgeco Plus # Ased Diana
-CS-DFC # AS Fanalamanga Alaotra Mangoro
-Disciples FC # Mama FC Betsiboka
Kianja Rabemananjara Boeny
-JTM Boeny # Cosfa
-FCO Boeny vs AS Adema
Kianja Matsiatra Ambony
-CFFA Analamanga # Fisakana FC Amoron’i Mania
-Precisport Matsiatra Ambony # Dato FC Atsimo Antsinanana
Kianja Analavory V7V
-FC Zanagasy V7V # Uscafoot